News - Kedu ihe bụ nhazi na ọrụ nke bọket
Gịnị bụ ọkwa na ọrụ bọket
Ndị na-egwupụta ihe na-arụ ọrụ n'oge dị iche iche ma họrọkwa ngwa ọrụ ngwa ngwa dị iche iche, ngwa ndị a na-ahụkarị dịka bọket, ndị na-emebi emebi, rippers, hydraulic clamps wdg. Naanị site na ịhọrọ ngwa kwesịrị ekwesị, anyị nwere ike ịnweta oke ọsọ ma rụọ ọrụ dị ike maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche. mana imara? Maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche, e nwere ihe karịrị iri bọket na-egwupụta akụ, nke ọ bụla nwere uru nke ya. Ihe ndị a bụ bọket a na-egwupụta akụ. Inweta ha ga - eme ka ị bụrụ Akụrụngwa dị ike karịa!
1. Standard ịwụ
Bọketị ọkọlọtọ bụ bọket ọkọlọtọ nke a na-ahụkarị na obere na ọkara. Ọ na-eji ọkọlọtọ efere ọkọlọtọ, ọ nweghịkwa usoro nkwenye doro anya na ahụ ịwụ. Ihe ndị e ji mara ya bụ: bọket ahụ nwere ikike ka ukwuu, ebe ọnụ buru ibu, na ebe a na-akwakọba ihe ka ukwuu, ya mere o nwere ihe na-ejuputa ihe dị elu, ịrụ ọrụ dị elu, na ọnụ ahịa mmepụta dị ala. Okwesiri maka ebe oru di egwu dika nkpuchi nke ala na ichota aja, ala, na gravel. A makwaara ya dị ka bọket ụwa na-akpụgharị. Ihe ọghọm bụ: n'ihi obere ọkpụrụkpụ nke efere ahụ, enweghị teknụzụ mgbatị, dịka efere ndị na-agba ume ma na-eyi efere, ndụ dị mkpụmkpụ.
2. Mee ka ịwụ ahụ sie ike
Buwụ ahụ siri ike bụ ịwụ nke na-eji ihe nchara na-eguzogide ọgwụ iji mee ka nrụgide dị elu na akụkụ ndị dị mfe na-adabere na ntọala mbụ nke ịwụ ọkọlọtọ. Ọ bụghị naanị na ọ na-eketa uru niile nke ọkọlọtọ ọkọlọtọ, kamakwa ọ na-eme ka ike na nguzogide dịkwuo ukwuu. Abrasiveness na ogologo ọrụ ndụ. Okwesiri maka oru ndi di ike dika igwu ala siri ike, nkume di nma, gravel na gravel loading.
3. Rock ịwụ
Nkume igwu ala na-anabata nnukwu efere n'ozuzu ya, na-agbakwunye efere ndị na-agba ume na ala, na-agbakwunye ndị nche n'akụkụ, na-etinye efere nchebe, ezé ịwụ dị elu, nke kwesịrị ekwesị maka itinye nkume, nkume ndị siri ike, nkume ndị dị na mbara igwe, nkume ndị siri ike, na-agbawa ọla , wdg Oke arụ ọrụ gburugburu ebe obibi. A na-eji ya na ọnọdụ ọrụ siri ike dị ka ngwuputa ọla.
4. Apịtị ịwụ
A na-amarakwa ịwụ olulu a na-akụpụta ihe dị ka bọket a na-egwugharị O nweghị ezé ma nwee obosara buru ibu. Bọket dị nnọọ mma maka mkpụcha ugwu nke nwere nnukwu ikike, na ịkọcha osimiri na ọwa mmiri.
5. Sieve ọgụ
Okwesiri maka igwuputa ihe ndi ozo. Igwu olulu na nkewa nwere ike gwuchaa n’otu oge. A na-eji ya na obodo, ọrụ ugbo, oke ohia, nchekwa mmiri, na ọrụ ọrụ ala.
Ezé ịwụ na-adabere na gburugburu ebe ọrụ n'oge usoro iji chọpụta ụdị ezé ịwụ ahụ. N'ozuzu, a na-eji ezé bọket dị larịị eme ihe iji gwupụta ala, ájá na-ekpo ọkụ, na kol. A na-eji ụdị ịwụ rọketị RC eme ihe maka igwu oke nkume siri ike, na ezé ịwụ bọket TL na-ejikarị eme ihe maka igwu oke kol. TL ịwụ ịwụ nwere ike ime ka ọnụọgụ ọkụ ọkụ. Na iji ya eme ihe, ndị ọrụ na-enwekarị mmasị ezé RC niile nke nzube. A na-atụ aro ka ị ghara iji ụdị ịwụ bọket RC n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche. Ọ kacha mma iji ezé-ịwụ bọket ezé, n'ihi na RC ụdị ịwụ bọket ga-amụba dị ka "aka" mgbe na-akaghị aka maka oge. Igwu igwu ala ebelatawo ike. Ezé-ịwụ bọket ezé na-ejigide elu dị elu n'oge usoro ejiji, nke na-ebelata nkwụsị igwu ala ma chekwaa mmanụ ọkụ.
02. Dochie ezé ịwụ n'oge
Mgbe akụkụ ngọpụ nke ịwụ bọket na-eyikwasị ike karị, ike nke onye na-egwupụta ihe chọrọ iji gbubie n'oge arụ ọrụ ahụ ga-abawanye ụba, na-ebute oke mmanụ na-emetụta arụmọrụ ọrụ. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa iji dochie ezé ịwụ ọhụrụ na oge mgbe akwa ịwụ bọket dị njọ.
03. Dochie oche eze na oge
Ejiji nke oche ezé dịkwa oke mkpa maka ndụ ndụ nke ịwụ bọket nke excavator. A na-atụ aro ka ị dochie oche ezé mgbe 10% -15% nke eze ezé gwụrụ, n'ihi na enwere nnukwu ọnụọgụ dị n'etiti oche ezé na ezé ịwụ. Nnukwu oghere ahụ gbanwere ihe kwesịrị ekwesị na nrụgide nke ezé ịwụ na oche ezé, ezé ịwụ ahụ na-agbaji n'ihi mgbanwe nke isi ike.
04. Nyocha kwa ụbọchị na tightening
N'ime ọrụ ndọtị kwa ụbọchị nke excavator, were 2 nkeji kwa ụbọchị iji chọpụta ịwụ ahụ. Isi nyocha ọdịnaya bụ: ogo nke ịwụ ahụ na ma enwere mgbape. Ọ bụrụ na ogo nke akwa ahụ siri ike, ekwesịrị ịtụle nkwado. Banyere ahụ bọket na cracks, ọ ga-arụzi site na ịgbado ọkụ na oge iji zere ịbawanye ogologo nke mgbawa n'ihi ndozi oge na-adịghị na-eme ka mmezi agaghị ekwe omume. Na mgbakwunye, ị ga-eji ụkwụ kwụọ ezé ịwụ ahụ iji hụ ma ezé ahụ ọ kwụsiri ike. Ọ bụrụ na ezé ezé, ekwesiri ikwusi ike ozugbo.
05. Gbanwee ọnọdụ mgbe iyi
Omume egosila na oge eji arụ ịwụ bọket, ezé kacha dị na bọket ahụ na-ebu 30% ọsọ karịa ezé ime. A na-atụ aro ka ị gbanwee ọnọdụ nke ezé ime na mpụga mgbe oge ojiji.
06. Lezienụ anya usoro ịkwọ ụgbọala
Usoro ịkwọ ụgbọala nke onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ dịkwa ezigbo mkpa iji melite itinye ezé ịwụ ahụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ kwesịrị ịnwale ịghara ịwụghachi bọket ahụ mgbe ọ na-ebuli ọganihu. Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ elu welitere oganihu mgbe ị na-adọghachi bọket ahụ, ọrụ a ga - Eme ka ezé ịwụ ahụ dịrị na traction elu, nke mere na ezé ịwụcha ahụ ewepụghị n'elu, ezé bọket ahụ dọwara. Ọrụ a chọrọ nlebara anya pụrụ iche na nhazi nke ihe ahụ. Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị ike eme ihe n'ịgbasa ogwe aka na izipu aka ahụ, na "kụọ" bọket ahụ na nkume ma ọ bụ manye bọket ahụ na nkume, nke ga-agbaji ezé bọket ahụ, ma ọ bụ Ọ dị mfe gbajie bọket ma mebie ogwe aka ahụ.
Onye ọkwọ ụgbọ mmiri ahụ kwesịrị ị attentiona ntị na nkuku ogwugwu ahụ n'oge ọrụ. Mgbe ezé ịwụ na-egwu ala n'akụkụ n'akụkụ ọrụ, ma ọ bụ nkuku camber abụghị ihe karịrị ogo 120, iji zere imebi ezé ịwụ ahụ n'ihi oke ọchịchọ. Kpachara anya ka ị ghara ịgbanye ogwe aka na-egwu ala aka ekpe na aka nri n'okpuru ọnọdụ nke nnukwu nguzogide, nke ga-eme ka agbaji ezé ịwụ na oche gia mebie n'ihi oke ike na aka ekpe na aka nri, n'ihi na ụkpụrụ nke usoro nke ọtụtụ ụdị nke ezé bọket anaghị atụle ikike dị n’aka ekpe na n’aka nri. imewe.